Todo eReaders dia tranonkala iray natsangana tamin'ny taona 2012, raha mbola tsy dia be mpahalala sy be mpahalala ny mpamaky ebook ary nandritra izay taona maro izay dia lasa fanovozan-kevitra ao anatin'ny tontolon'ny mpamaky elektronika. Tranonkala iray ahafahanao mampahafantatra anao ny vaovao farany eo amin'ny tontolon'ny eReaders, ny famoahana marika farany manan-danja toy ny Amazon Kindle sy Kobo ary ireo hafa tsy dia malaza loatra toa ny Bq, Likebook, sns.
Feninay miaraka amin'ny famakafakana fitaovana matihanina. Notsapainay tsara ny eReaders nandritra ny herinandro maro mba hilazana ny tena zava-misy amin'ny famakiana tsy tapaka miaraka amin'izy ireo. Misy zavatra manan-danja toy ny fihazonana sy ny fampiasana izay hamaritana ny fiainana tsara amin'ny famakiana amin'ny fitaovana izay tsy azo isaina raha toa ka nahita ilay fitaovana fotsiny ianao ary nanana azy io nandritra ny minitra vitsy.
Matoky ny ho avy amin'ny famakiana nomerika sy eReaders izahay ho toy ny fitaovana sy fanohanana ho azy. Izahay dia mitandrina ny vaovao rehetra sy ny teknolojia vaovao izay tafiditra ao amin'ireo fitaovana eny an-tsena.
Ny ekipa fanontana Todo eReaders dia misy vondrona iray manam-pahaizana amin'ny eReaders sy mpamaky, fitaovana ary rindrambaiko mifandraika amin'ny famakiana. Raha te ho anisan'ny ekipa koa ianao dia afaka andefaso aminay ity takelaka ity mba ho tonga mpanonta.
Mpitantana tetikasa ao amin'ny Actualidad Blog aho, tia eReaders ary mpiaro ny famoahana nomerika, tsy manadino ny mahazatra 😉 Manana Kindle 4 sy BQ Cervantes 2 aho ary te hanandrana ny Sony PRST3
Ny tanjoko ankehitriny dia ny hampifanaraka ny tantara foronina amin'ny teknolojia hatramin'ny andro iainako. Vokatr'izany, ny fampiasana sy fahalalana ny fitaovana elektronika toy ny E-Reader, izay ahafahako mahafantatra tontolo hafa maro nefa tsy miala ao an-trano aho. Ny famakiana boky amin'ny alàlan'ity fitaovana ity dia tena mora sy mahazo aina, noho izany tsy mila zavatra hafa ankoatry ny E-Reader manana kalitao.
Mpanadihady sy mpandalina geek. Tia gadget sy teknolojia. "Heveriko fa azo atao ny misafidy ny ho olon-tsotra ny olon-tsotra" - Elon Musk.
Asturianina, reharehany avy any Gijon ho marina. Injeniera teknika tia an'ireo mpamaky hatramin'ny nivoahany. Kindle, Kobo, ... Tiako ny mahafantatra sy manandrana ireo boky e-samihafa, satria samy hafa daholo izy ireo ary manana zavatra betsaka atolotra.
Hatramin'ny nahitako Kindle PaperWhite no fitaovana tiako hamakiana alohan'ny hamelana andro iray hafa handeha. Saika "fanatisme" ho an'ny eReaders ity dia hiezaka hamindra any amin'ny Todo eReaders aho.